Ọkachamara Ọkachamara Nkọpụta Fabgha orylọ Ọrụ Wụchara Ahịa - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Professional Design Steel ricgha Factory Shed Price
Professional Design Steel Ụgha Factory wụsịrị Price
Structurelọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ihe owuwu (ogwe osisi / girder, ogidi / ogidi ígwè), usoro nke abụọ (ụlọ na mgbidi purlin, ihe nkwado ígwè, eriri-ụlọ wdg), ọnụ ụzọ na windo, na ngwa ndị ọzọ.
Inidustry: Wokeshop, nkwakọba, na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ.
Commerce: Mall, hotel, ngosi ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ ụlọ.
Public: School, Ọbá akwụkwọ, n'ámá egwuregwu, churce, wdg
1. Prefab ricated. Ntinye ngwa ngwa ma dịkwa mfe, ịchekwa oge na nchekwa ọrụ.
2. Emebere ahaziri, nhazi dị iche iche, ọdịdị dị mma, agba dị iche iche maka mgbidi na ụlọ
3. fechaadị mfe, mbugharị dị mfe na ịchekwa ego,
4. Mbughari, cmma iji zukọta ma ọ bụ gbasaa. Ngwa ngwa ngwa na ntinye nfe
5. Gburugburu ebe obibi, egweri, enweghi ihe mkpofu mepụtara
6. Akwa ike, nwere ike iguzogide ọkwa 8 ala ọma jijiji
mmiri mmiri, ọkụ àmà; nwere ike iguzogide ifufe siri ike na nnukwu snow.
7 . Ogologo ndụ. enwere ike iji ihe karịrị afọ 50.
8. Ogologo obosara, otu ma ọ bụ ọtụtụ oge, nwere ike ịnwe ogologo oge kachasị na 36m na-enweghị ogidi etiti.
1) Size: MOQ bụ 100m2, obosara X ogologo X eave elu, mkpọda ụlọ
2) :dị: Otu mkpọda, mkpọda abụọ, mkpọda ugwu; Single-span, abụọ-adịru, Multi-span, otu n'ala, okpukpu abụọ ala!
3) Isi: Ciment na nchara ntọala bolts
4) Kọlụm na okporo osisi: Ihe Q345 (S355JR) ma ọ bụ Q235 (S235JR) nchara, njikọ njikọ niile! Nnennen cross-section or Agbanwe cross-section!
5) Bracing: X-type ma ọ bụ V-type ma ọ bụ ụdị nkwado ọzọ nke e mere site n'akuku, ọkpọkọ gburugburu, wdg
6) C ma ọ bụ z ​​purlin: Size si C120 ~ C320, Z100 ~ Z200
7) Ulo na mgbidi obubọk: Single yil corrugated ígwè mpempe akwụkwọ0.326 ~ 0.8mm oké, (1150mm n'obosara), ma ọ bụ sandwich panel na EPS, ROK WOOL, Pu wdg mkpuchi ọkpụrụkpụ gburugburu 50mm ~ 100mm,
8) Elu: Ihe osise abụọ nke Anti-nchara ihe osise!
N'ihi na ahịa ọmụma
Ọ bụrụ na ị chọrọ anyị chepụta gị, PLS enye anyị ndị na-esonụ oke
Nha: obosara X ogologo X eave elu, mkpọda ụlọ
1) Live ibu n'elu ụlọ (KN / M2) Wind ọsọ (KM / H)
2) Ọrụ nke ụlọ, ngwa ime ụlọ
3) Ihe pụrụ iche chọrọ na ọrụ
4) Ala ọma jijiji ibu ma ọ bụrụ na nwere. Ibu snow (KG / M2)
5) Chọrọ maka ọnụ ụzọ na windo
6) Crane (ma ọ bụrụ na nwere), kreenu span, kreenu inwego elu, max inwego ikike, max wheel mgbali na min wheel mgbali!
Steel Structure usoro nhazi:
1. Jikere akụrụngwa: bee ígwè efere ma ọ bụ jiri internation size H ngalaba nchara na n'akuku nchara, gburugburu tube, gburugburu ígwè, square tube wdg.;
2. Mgbakọ na ịgbado ọkụ: ndị welders anyị ga-eso eserese ahụ iji kpokọta ndị otu nchara wee kpụkọta ha ọnụ dịka dum / kọlụm / nkwado na ihe ndị ọzọ; (Onye nyocha anyị dị mma ga-elele nchara ígwè mgbe ọ gwụsịrị ịgbado ọkụ, nke a bụ nyocha nke mbụ)
4.Paint: N'ime awa 2 mgbe aja gbawara, ndị nchara niile kwesịrị ịgba. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ agba ọ bụla na akara ọ bụla nke agba. (Nke atọ àgwà ego)
6.Packing na loading: Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ka anyị buru ngwongwo site na ngwongwo ndị dị nso, anyị ga-agbakọ ndị otu nhazi ígwè n'otu n'otu na skid nchara wee kee ngwugwu nchara niile nke ọma. ( Nke anọ àgwà ego)
Mbukota: Main ígwè etiti enweghị mbukota ibu na 40 ′ OT ma ọ bụ HQ, ụlọ na mgbidi obubọk ibu na 40 ′ HQ! Ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
* Enwere ike izipu ndị injinia na ndị ọrụ mba ofesi maka nduzi na nrụnye.
Ejirila ihe niile n'ime akpa ahụ yana ị kwesịrị itinye ya na saịtị ahụ, jikọọ na ọkụ eletrik na mmiri
1. Tọrọ ntọala n'afọ nke 2003, ọkachamara dị iche iche prefab ụlọ na akpa ụlọ na ígwè Ọdịdị Ndinam.
2. Karịrị ndị ọrụ R&D 50 na ndị ọrụ ihe karịrị 400 ndị ọrụ
3 . 35, 000 square maters factory, zuru akara mmepụta
4. Iru eru: OA (DIN18800), ISO9001, BV, SGS; (CSA, AS / NZS, UL wdg)
5. High Construction arụmọrụ, nnyefe oge ga-n'ime 20 ruo ụbọchị 30
a. Kedu ụdị ụlọ ọrụ ị bụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ígwè na-ewu ụlọ ihe Manufacturer emi odude ke Dezhou China. Anyị nwere ụlọ ọrụ azụmaahịa na Qingdao, nke kachasị mma maka ndị ahịa ma na-arụ ọrụ maka mbupụ. Anyị na-enweta aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị maka ọrụ ọrụ anyị, ọrụ na-ekpo ọkụ ma na-eche echiche. N'ihi na anyị maara na azụmahịa ogologo okwu dabere na njikwa mma, ọnụahịa, mbukota, oge nnyefe wdg.
b. Yourlọ ọrụ gị ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị factory, otú ị ga-enwe ndị kasị mma price na asọmpi price. Anyị factory ekpuchi ebe ndị 52,000 square mita.
c. ihe Kedu uru nke ngwaahịa na ụlọ ọrụ gị?
a) imezi imewe dị site n'aka anyị, imeghari ahịa na iji gburugburu ebe obibi ka mma, ma nyere ndị ahịa aka inweta asọmpi ndị ọzọ n'ahịa gị.
b) ndụ ogologo ndụ.
d. Nwere ike ịnye ọrụ nhazi?
Ee, anyị nwere ihe karịrị 100 nhazi injinia. Anyị nwere ike chepụta zuru ezu ngwọta nghọta dị ka kwa gị chọrọ. Ha na-eji ngwanrọ: Auto CAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) V12.0.etc.
e. You na-enye nwụnye ntuziaka na saịtị ofesi?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ nke nrụnye, nlekọta na ọzụzụ site na mgbakwunye. Anyị nwere ike izipu onye injinịa ọrụ aka ọrụ anyị ka ọ gafee ọrụ echichi na mba ofesi. E wezụga nke ahụ, anyị nwekwara mba ofesi na-eduzi ndị otu ntinye ihe karịrị mmadụ iri atọ.
Ha enweela ihe ịga nke ọma n'ọtụtụ mba, dịka Iraq, Dubai, South Africa, Algeria, Ghana, Gabon, Tajikistan, Burkina Faso, Panama, Australia.
Verserụ Ọrụ Ndị Ọzọ
Ahịa gara anyị factory
Tinye: 201lọ 201, Buildinglọ 32, Tian'an Cyber ​​Park, Chengyang, Qingdao, China
Previous: Professional Manufacturer of Steel Structure Onodi si China
Next: Kpaliri Prefab Industrial Structure Steel nkwakọba Manufacturer
Prefab Steel Building nkwakọba
Steel ụba Multy Stories Building
Steel Structure factoy wụsịrị
Prefab ígwè etiti Ọdịdị ụlọ.